သငျသညျယနေ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြံ့ဆုံးနှင့်ထိပ်တန်းအဆင့်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအချို့ကိုရှာကြသည်? အကယ်.,အငှားလျှင်အမည်ဝှက်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! သငျသညျအစဉျအမွဲလုံးဝအခမဲ့လိင်ဂိမ်းများနှင့်မျှော်လင့်ချက်အကြောင်းကိုစိတ်ကူးနိုင်လုံးဝဘာမှခံစားကြည့်ပါ! ရှင်တို့စိတ်ကူးကြည့်လို့ရနိုင်သမျှအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းအမျိုးအစားတိုင်းကိုဖွင့်ပြမယ်၊ကာတွန်းရုပ်ပြလိင်မြင်ကွင်းတွေ၊စအိုညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေ၊လိင်ဆော့ကစားသူတွေ၊ကောင်းဆုံးနဲ့အပူဆုံးအဝတ်မဲ့မိန်းကလေးဂိမ်းတွေအထိပေါ့။, "အကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ဂိမ်း"အင်္ဂါရပ်ကသင်ရှာနေတဲ့လိင်အဂါၤတွေဆီခေါ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်။
အစဉ်အဆက်ကစားခဲ့ကြအများဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းအထက်ဖြစ်ကြောင်းအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်အဖြစ်အများအပြားဂိမ်းအင်္ဂါရပ်များရှိပါတယ်. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာကျွန်မကျေနပ်မှာမဟုတ်တော့သလိုအခြားလိင်ပြောင်းထားသူစုစုပေါင်းကျရှုံးတာတွေ့ရတယ်။ ငါထိန်းချုပ်မှု၌ဖြစ်၏ကဲ့သို့ခံစားရဖို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားချင်တယ်။ ငါသည်ဤပူသောသူငယ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ချင်တယ်. သူတို့ကိုလိင်ကစားစရာအရုပ်မျိုးတွေနဲ့ကစားပြီးနောက်ထပ်အော်ဟစ်စေချင်တယ်။ သင်ကသာမန်ညစ်ညမ်းဆိုဒ်များပေါ်တွင်လိင်မြင်ကွင်းများစောင့်ကြည့်ရနိုင်ပုံကိုပျင်းစရာအဖြစ်ငါ့ကိုသိရ.
အားလုံးသူတို့၏မိဘများသူတို့လုပ်နေတာကိုချစ်မသိဘူးယုတ်သောအရာတို့ကိုသင်ပြနိုင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေသောကလေးအကြောင်းဖြစ်ကြောင်းအရူးဂိမ်း. နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လိုချင်သောအဖြစ်အွန်လိုင်းဤအညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုခံစားကြည့်ပါနှင့်ကစား,သင်ကတိုတောင်းမြန်ဆန်တဲ့အနည်းငယ်သာပျော်စရာအခမဲ့လိင်သို့မဟုတ်အခမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းတစ်ခုမာရသွန်ချင်ရှိမရှိ,အဆိုပါနောက်ကျမပါဘဲဂိမ်းကစားမဆိုကြာချိန်,သင့်ရဲ့ပျော်စရာကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည့်ကြားခံနှင့်နှေးကွေးအင်ဂျင်ကို. ဒါဟာထိပ်တန်းအမည်ဝှက်ပေါ်မှာရှိသမျှဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်.
ဒီအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေမှာအတုအယောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့အံ့ဖွယ်အဓိပ္ပါယ်မြင့်မားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ရှိတယ်၊တကယ့်အစစ်ပဲလို့ကျိန်ဆိုရမှာပါ။ ဤအထူးချွန်ဆုံးအသစ်လိင်မြင်ကွင်းများသင်တို့အဘို့အလုံးကိုရှိပါတယ်,အားလုံးလုံးဝအခမဲ့. ဒါဟာထက်မဆိုပိုကောင်းရပါဘူး! သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းကဲ့သို့မခံစားရဘူးဆိုရင်သင်အမြဲတစ်စုံတစ်ဦးကပြုတဲ့ပျော်စရာဂိမ်းကစားရန်သင့်အားဆောင်ခဲ့ဦးမည်သောအင်္ဂါရပ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. ဤအင်္ဂါရပ်ကိုသင်သာလိင်ဂိမ်းကိုယ်တိုင်ကကစားခံရဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်., ယင်းသည်3လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊
အဒရီရာခပ်ကသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့သည်ငါ့ထံသို့ဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်ဤသင့်အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းဖြစ်လာစေခြင်းငှါ,., ဒီညစ်ညမ်းဗီဒီယိုဂိမ်းအမျိုးအစားတွင်သင်သည်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုဂိမ်းအချို့ကိုဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မယ်,ဒါကြောင့်ကောင်းစိုစွတ်သောနှင့်ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်သင်ခန်းစာအဘို့အဖြစ်အစဉ်အဆက်စဉ်းစားနိုင်သည်အခြားအမျိုးစုံစိတ်ကူးယဉ်ကဲ့သို့သင်တို့အလွန်စိတ်အားထက်သန်နေသောယုတ်ကျောင်းကလူ. စာကြည့်တိုက်အတွက်နမ်းနှင့်ပျော်စရာ.
ဤမျှလောက်များစွာသောအရူးလိင်မြင်ကွင်းများသင်ဟုတ်ကဲ့ပြင်းထန်သောအရည်အသွေးပေမယ့်သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်အံ့သြဖွယ်တီထွင်ဖန်တီးမှုရ. အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုဟုတ်ပါတယ်,အားလုံးညာဘက်,တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံး,အားလုံးအခမဲ့အလွယ်တကူသင်ဖို့လက်လှမ်းမီ,နှင့်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ရောက်ဒါလွယ်ကူသည်,သင်သေံတင်ထားရန်အလင်းစိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်စိတ်ဓါတ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းခံစားနိုငျထိုသူတို့သည်သင့်အမှန်တကယ်တပ်မက်ခြင်းနှင့်ထိုက်သောအရာကိုအကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောဆုအားလုံးရရှိခဲ့ပါပြီ., သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားကြသည်ဖြစ်စေမ,သင်ထိပ်ညစ်ညမ်းအမည်များကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်နှင့်သင်စွန့်ခွာချင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုသက်သက်အပြုံးပီတိ၏မမေ့နိုင်သောကမ္ဘာရန်သင့်အားတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့လည်းမရှိရှိသမျှကိုပျော်ရွှင်မှုပေးသည်ကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျ. ဤရွေ့ကားဂိမ်းအားလုံးလာမည့်အဆင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအဘို့သင့်မျှော်လင့်ချက်များ၏အသစ်စံပြန်ဖွင်နှင့်ဖြစ်လာလိမ့်မည်! သင်အမြဲစိတ်ကျေနပ်မှုထားခဲ့ပါနဲ့ညာဘက်ကဒီမှာကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်လိမ့်မည်.
ဤထိပ်တန်းညစ်ညမ်းဂိမ်းအားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်မျိုးကျေနပ်အောင်လိမ့်မည်,တားမြစ်ထားသော,နိုးနိုးကြားကြား,အစွန်းရောက်,သို့မဟုတ်ရိုင်းသော. သငျသညျအစဉျအမွဲအလုံအလောက်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ,သူတို့အဆက်မပြတ်မွမ်းမံကတည်းက,အစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည်သင်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှု,လှုံ့ဆော်မှုဂိမ်းအမြဲရှိလိမ့်မည်,သင်ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ထင်လျှင်မူကားငါတို့သည်သင်တို့အစွန်းကျော်သင်တွန်းအားပေးရန်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားရန်သင့်အားဝံ့! သင်၏ကိရိယာများအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတဦးတည်းအပေါ်ကအားလုံးကိုခံစားကြည့်ပါ,မခွဲခြားဘဲအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု၏. ဟုတ်ကဲ့,သင်သည်ထိုမှန်ကန်သောကြားသိ,သူတို့အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းကစားပူဇော်! သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်များ၏ထိတွေ့မှာသင်တို့အဘို့ပဲမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အပေါင်းတို့နှင့်ရရှိနိုင်သည်မဟုတ်?
ဒါဟာအစွန်းရောက်ပျော်စရာရှိခြင်းများအတွက်သင့်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခွင့်ပြု. သင့်ကိရိယာတွေထဲကတစ်ခုစီမှာကစားပါ။ သင့္မိုဘိုင္းဆယ္လူလာဖုန္းမွသည္သင့္လက္ပ္ေတာ့ပ္အထိပင္သင္၏တက္ဘလက္တြင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။ သင်နေသောနေပါစေ,သင်ဘယ်မှာ,သို့မဟုတ်သင်သွားကြသည်ဘယ်မှာ,သင့်ရဲ့အချိန်ဇုန်သို့မဟုတ်ဒေသ,သင်သည်အဘယ်သို့ကြိုက်နှစ်သက်,တောင့်တခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒ.
ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာအားလုံးဖွင့်နှင့်သုံးစွဲဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်. သင့်အတွေ့အကြုံကိုပို၍ပင်ထပ်မံတွန်းအားပေးလိုပါကသင်၏အသွင်သဏ္ဌာန်တုဟန်းဆက်များတွင်ပျော်မွေ့ပါ! သင်ထွက်လက်လွတ်မသေချာစေရန်အားလုံးအဓိကအင်္ကျီတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်! တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)တစ်ဝက်(သို့)ရှာပုံတော် 2! ဒီတစ်ခါလည်းသင်ရုံသင့်ရဲ့ဂီယာအိုင်(သို့)မိုက်ခရိုဆော့(ဖ်)ပုံသေအဖြစ်မှန်၏လုံလောက်စွာမရနိုင်နှင့်စာရင်းပေါ်နှင့်ပေါ်တတ်.
ထိပ်တန်းညစ်ညမ်းအမည်ဝှက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာရုံဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကိုယ်တွေ့အားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တွေ့မြင်အချိန်အကြောင်းဖွင့်! ဒါဟာသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်လိင်အသက်အဘို့ပြုအကြီးမြတ်ဆုံးမျက်နှာသာဖြစ်လိမ့်မည်. ကြီးကျယ်တဲ့ခိုးခိုးအော်တိုညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေ၊လိင်ပြောင်းထားသူတွေ၊လိင်ပြောင်းထားသူတွေ၊လိင်တူလိင်ကွဲညစ်ညမ်းတဲ့ဂိမ်းတွေကိုခံစားကြည့်ပါ၊လိင်တူချစ်သူတွေညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေ၊ပန်းပွားသူတွေ၊ပြင်းထန်မှုနဲ့ပျော်စရာကိုပေါင်းပေးမယ့်အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပျော်ခွင့်ပေးတဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေ၊သင်ရှိနေသလိုအလားတူညစ်ညမ်းဂိမ်းထဲပါနေတဲ့ပူအိုက်ညစ်ညမ်းစကားပြောတဲ့သူစိမ်းတွေနဲ့တောသွားတာကိုနှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးလား။
အမည်ဝှက်အမျိုးမျိုးနှင့်ပြင်းထန်သောမတူကွဲပြားမှုဆောင်တတ်၏။ သင်နေသောနေပါစေသေချာစေရန်,အဘယျသို့ပေါ်တွင်သင်လှည့်,သို့မဟုတ်သင့်လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်,သင်ချစ်တစ်ခုခုရှာတွေ့. သူတို့ကလုံးဝလူတိုင်းဖြည့်ဆည်း! ဒါကြောင့်,ယနေ့အားဖြင့်ရပ်တန့်ကအားလုံးကိုထုတ်စစ်ဆေး,သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏အချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်!
အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်း၏ဤစုဆောင်းခြင်း,သင်သည်သင်၏ညစ်ပတ်စိတ်ထဲမှာပတ်ပတ်လည်အပြေးသမျှသောယုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်မျိုးစိတ်၌မွေ့လျော်ရလိမ့်မယ်. သုံးစွဲသူများမှနာရီအလိုက်ပြင်ဆင်မှုပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်၍ဝီကီပီးဒီးယားကိုပို၍ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားကနေအကောင်းဆုံးအခမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိသည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှကစားသမားတွေနှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုမှာလိင်ဆော့(ဖ်)ဝဲနှင့်အတူလာမယ့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. လူကြီးဆိုဒ်များမီးဂိမ်းများကိုသာပေးသောအခါဤအသစ်ထွားကြွား5 မျိုးဆက်ဂိမ်း၏ကြိုးများသည်သင်ပြန်ကစားခဲ့သည့်အရာများထက်များစွာပို၍ကောင်းပါသည်။
သငျသညျပေါလ်ရှုထောင့်ကနေအမာခံလိင်အတွေ့အကြုံများကိုမွေ့လျော်ရလိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏အရုပ်ပုံနှင့်အတူတဦးတည်းဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုထိုကဲ့သို့သောအနက်ဂိမ်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံနိုင်ပါလိမ့်မယ်. ဒီခေါင်းစဉ်တွေဟာပလက်ဖောင်းအသင့်ဖြစ်နေပေမဲ့၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ထဲကအခြားအရာအားလုံးလိုပဲ၊ဒါတွေကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာကစားဖို့အကြံပြုပါတယ်။ သင်သည်ဤလမ်းအတွက်အများကြီးပိုစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကင့်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကို၏လိင်ဆော့ထား.သင်လိုချင်တာဘာမှမကိုလျက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်. သင်ခြစ်ရာကနေသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင့်င်. သူတို့ကိုတရားဝင်ဆယ်ကျော်သက်တွေလို(သို့)အကောင်ဆုံးအသားစယူတာနဲ့အလုပ်အများဆုံးအသားစယူတာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤသူငယ်ကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌သင်သိမည်သူမဆိုတူအောင်ကြည့်စေနိုင်သည်။ ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းကဆရာနဲ့တူအောင်လုပ်ထားပြီးသူမနဲ့ကစားရင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်။ အားလုံးသည်အပေါက်ပျော်စရာအဘို့အပွင့်လင်းကြသည်။ သားထိန်း၊မြည်းတွေကိုကိုက်စား၊အသားကိုကိုက်စား၊မျက်နှာပေါ်ကိုက်စား၊မျိုချတယ်။, သင်ကြိုးစားချင်ဘာမှအနေအထားနှင့်သင်တွေ့ကြုံခံစားချင်ညစ်ပတ်တိရစ္ဆာန်များဤဂိမ်းများတွင်ခံစားနိုင်.
ကာတွန်းတွေ၊ကာတွန်းတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေဒါမှမဟုတ်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကနေဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုရုပ်ပြောင်အမျိုးအစားရဲ့ဂိမ်းအသစ်တွေမှာသင်တွေ့ရမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေပါ။ ကာတွန်းနှင့်ကာတွန်းရုပ်ရှင်လောကီသားတို့သည်အနေဖြင့်,ငါတို့ရှိသမျှသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရေကူးပြပွဲကနေရွက်ပါလိင်ဂိမ်းများရှိသည်. မိသားစုထဲကဖာစတင်းလိုကလေးတွေကိုပြောနေတာပါ။ပွန်စတင်း(သို့)အမေရိကန်အဖေဆီကဖရန်စတင်းစမစ်ပါ။ ဒါတင်မကကျွန်မတို့မှာလိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုရှိတယ်၊အဲဒီထဲမှာဒီသားငယ်သုံးကောင်ဟာလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာလိင်တူချစ်သူသုံးကောင်ရှိနေကြတယ်။, ဤဂိမ်းများတွင်ခံစားနိုင်ကာတွန်းထဲကနေအခြားမိန်းကလေးများအေးခဲနေတဲ့ကင်မ်ဖြစ်နိုင်,လုံးဝသူလျှိုထံမှသားငယ်များနှင့်ငါ၏အမြင်းဠာထဲကနေပင်သူငယ်ဖြစ်ကြ၏။
ငါတို့သည်လည်းဗီဒီယိုဂိမ်းပူနှင့်အတူရုပ်ပြောင်ခေါင်းစဉ်များ. သင်အမြဲလူကြိုက်များသေနတ်သမား၏အပေါငျးတို့သအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူပြောင်းပြန်ဂိုဏ်းပေါက်ကွဲသံကြီးခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မတို့ဆိုက်မှာညစ်ညမ်းတဲ့ဂိမ်းအဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်။အမျိုးသမီးချန်ပီယံအားလုံးနဲ့လိင်တုပြိုင်တဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားနည်းကစုန်းကဝေလောကအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပြောင်မှာပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်ယနေ့ခေတ်လမ်းလျှောက်သူ၏ပရိတ်သတ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်,သို့ဖြစ်.သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်တွင်ရှိသည်သောအဆုံးစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ပြောင်ကစားသင့်ပါတယ်. ဒါဟာကစားပွဲ၌သင်တို့ကိုအစဉ်အမြဲတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်သောအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်အချို့နှင့်အတူကြွလာ. ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၲဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကျနော်တို့စအိုနယ်ပယ်ကနေအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုများ. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှယောက်ျားမြည်းသည်အရူးဖြစ်ကြောင်းတူဒါဟာပုံ. ဤအမျိုးအစားနေဆဲသမျှသောဤနှစ်များပြီးနောက်အများဆုံးချစ်ရာသခင်၏တဦးတည်းဖြစ်နေဆဲ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်မှာအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေနဲ့သင့်စအိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါတယ်။
ငါတို့သည်ဤဂိမ်းအတွက်ဤမျှလောက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်တွေ့ကျသည့်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်ကိရိယာများရှိသည်၊၎င်းတို့တွင်၎င်းတို့၏သားငယ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ကာ၎င်းတို့၏မြည်းများကိုကန့်သတ်ချက်များမှကွာဟပြီး၎င်းတို့အတွင်းမှပူးကပ်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းဆိုက်ပေါ်မှာဤလောကထဲကဖြစ်ကြောင်းအချို့ဂိမ်းရှိသည်. ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၲဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နဂါးလိင်ဂိမ်းအချို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့လည်းလာကြသည်၊ထိုထဲတွင်စအိုလုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဂမ္ဘီရသုက်ပိုးအစားအလုံးအရင်းဖြင့်ထုထည်ကြီးမားသောနဂါးအန်စာတုံးများပါဝင်သည်။, ဒစ်ကင်းရဲ့အမြီးအောက်မှာဒစ်ကင်းကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီထဲမှာဒစ်ကင်းရဲ့ဒစ်ကင်း၊ဒစ်ကင်း၊ပီကင်း၊ပီကင်းစတဲ့တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးကိုအခြေခံထားတဲ့ဒစ်ကင်းရဲ့အမြီးအောက်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်။
သင်သည်သင့်ညစ်ညမ်းမှုလိုအပ်ရာများကိုနှစ်သက်ပြီးလက်တွေ့ဘဝတွင်သားငယ်များကိုထိတွေ့ခြင်းအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုသင်ပေးနိုင်သည့်ချိန်းတွေ့နည်းကိုကစားလိုပါကချိန်းတွေ့ခြင်းကိုသင်စတင်ကစားသင့်သည်။ ကျွန်မတို့မှာအကောင်းဆုံးတွေရှိပြီးလိုအပ်ချက်တွေ၊အကြိုက်တွေအမျိုးမျိုးအတွက်လာကြတယ်။ ဤအမျိုးအစား၏အချို့အခမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ်း,သင်တည်နေရာတွေအများကြီးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပွင့်လင်းမြေပုံများမှတက်ခူးနိုင်ငယ်များနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြက်တောင်တည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။, ငါတို့သည်သင်တို့အနေနဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လိင်တူချစ်သူစတူးအဖြစ်ဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်လိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့ဂိမ်းများရှိသည်,သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ချင်သူနှစ်ဦးစလုံးနှင့်စက်ဘီးအတုယောက်ျားတွေစုံလင်သောအရာဖြစ်ပါသည်. သင်အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ဖြစ်စေအဖြစ်ကစားနှင့်သင်မြေပုံပေါ်တွင်ရှာတွေ့မည်သူမဆိုအပေါ်ထိမှန်နိုင်သည့်အတွက်နှစ်ဖက်ချွန်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပျော်မွေ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရဲ့တဦးတည်းဂိမ်းပင်ရှိပါသည်။
ဤချိန်းတွေ့သင်္ကေတပုံစိတ်ကြိုက်နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသွင်တုကမ္ဘာထဲကဇာတ်ကောင်အဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကောင်တွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့မှုဟာတကယ်ခံစားရမှာပါ၊အကြောင်းကဆွေးနွေးမှုဟာရေးကောင်းလို့ပါ။ ဒါ့အပြင်ကိုယ်ရိုက်မယ့်ဇာတ်ကောင်တွေဟာအလွယ်တကူခိုအောင်းခွင့်မရှိကြလို့ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကိုဤအမျိုးအစားကနေတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်သင့်ချိန်းတွေ့နည်းပညာတွေကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ဟုတာပါဒါကြောင့်ဖွင့်.
အငှားထွက်တဲ့အမည်ဝှက်တွေလည်းအကောင်းဆုံးပုံဂိမ်းတွေကိုစုစည်းထားတယ်။ဘယ်လောက်နူးညံ့၊ဘယ်လောက်ညစ်တီးညစ်ပတ်ဖြစ်နေပါစေပေါ့။ ကျနော်တို့လုံးဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုယုံကြည်,အဘယ်သူမျှမရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်မျှမတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ. ကာလပတ်လုံးသင်ဥပဒေရေးရာအသက်အရွယ်ဖြစ်သကဲ့သို့,သင်ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူသင်၏ရိုင်းတိရစ္ဆာန်စူးစမ်းဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်မှာအများဆုံးကစားကြတဲ့တိရစ္ဆာန်ကစားနည်းတွေအကြောင်းပြောကြရအောင်။
အပြင်းထန်ဆုံးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့စတင်ဖို့ဒီဆိုက်မှာတိရစ္ဆာန်ကစားနည်းတွေစုစည်းမှုရှိတယ်။ဒါကသင့်ကိုလိင်တုလောကထဲကအကောင်းဆုံးခြေတုကိုလွင့်ပစ်စေမှာပါ။ သင်ကမိန်းကလေးတွေခြေလျင်အလုပ်အကိုင်များပေးသို့မဟုတ်သင့်လက်၌သူတို့ခြေကိုလိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုမထူနိုင်. သင်သည်သူတို့၏လက်ခြေများနှင့်ခြေချောင်းများတွင်ဝုန်းခနဲဝုန်းခနဲဖြစ်သွားနိုင်ပြီးကလေးငယ်အချို့သည်သူတို့၏ခြေထောက်များတွင်ဝုန်းခနဲလဲကျသွားနိုင်ကြောင်းမဖော်ပြပါနှင့်။ လိင်တူချစ်သူခြေတွေကစားတဲ့ဂိမ်းတွေတောင်ရှိပါတယ်။မိန်းကလေးခြေတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့စအိုခြေထောက်တွေကိုစိုက်ကြည့်တဲ့ကစားနည်းတွေတောင်ရှိပါတယ်။
သင်ကိုယ်ဝန်လိင်နှင့်ပိုက်ကွန်မျိုးသို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်,ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အနယ်ပယ်၏အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းများများ. ကလေးငယ်များကိုလိင်တုထိန်းခြင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုတွင်သွေဖည်သွားစေနိုင်သည့်ဂိမ်းများကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ပုံပြင်တွေကမောင်းထုတ်တဲ့ဂိမ်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီမှာဒီသားငယ်တွေကိုသူတို့ထဲမှာအလုံးလိုက်ကိုယ်ဝန်ရအောင်လုပ်မယ်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးထွားပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်သင်သည်လည်းသူတို့ကိုလျက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တောင်မှအရူးကိုယ်ဝန်မျိုးနှင့်အတူနဂါးလိင်ဂိမ်းရှိသည်။ ဘီစီဘီစီမွေးမြူရေးဂိမ်းတွေတောင်ကစားနိုင်သလိုမယားဖြူတွေပြည့်နေတဲ့နွားထီးတစ်ကောင်လို(သို့)ဒါကိုဖြတ်ပြီးထိုင်ရတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်လိုကစားနိုင်ပါတယ်။
သင်လွှမ်းမိုးမှုကိုပေးတဲ့အားကောင်းတဲ့ခံစားမှု(သို့)စိတ်သက်သာစရာအတွက်ဘောင်ထဲဝင်နေတယ်ဆိုရင်တောင်သင့်အတွက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေအခမဲ့ရှိတယ်။ တဦးတည်းလက်တွင်,ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဒိုမီနိုအဖြစ်ကစားလတံ့သောဂိမ်းရှိသည်။ သူတို့ထဲကတချို့အတွက်,သင်မာစတာအဖြစ်ကစားပါလိမ့်မယ်,ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တောင်မှသင်တစ်ဦးဒိုမီနိုပြည်တော်ပြန်အဖြစ်ကစားနိုင်သည့်အတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။ သင်မာစတာဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်သောဂိမ်းများတွင်,သင်ချင်တယ်သို့သော်အချို့လိင်ကျွန်မိန်းကလေးများကိုလျက်နိုင်ပါလိမ့်မည်. သူတို့ကိုကြိုးနဲ့ချည်ပြီးအပေါက်တွေဖောက်၊အော်ဟစ်အောင်လုပ်၊တပ်ကြပ်ပြစ်ဒဏ်တွေချ၊တပ်ကြပ်အဖြစ်ခိုင်းနိုင်တယ်။
သင်တပြင်လုံးကိုလိင်တူချစ်သူစိတ်ကူးယဉ်သို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်,သို့ဖြစ်.သင်တို့သည်နောက်တော်ပြန်အဖြစ်ကစားရာအတွက်ဘီအမ်ဂိမ်းခစျြလိမျ့မညျ. ဤဂိမ်းများတွင်,အကျိုးသက်ရောက်မှုကစားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များလမ်းပိုပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်များမှာ. မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လျက်၊ကိုးကွယ်လျက်၊အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းတဲ့အမျိုးတွေကို၊ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့အများကြီးကိုပျော်မွေ့လိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့တောင်မှသင်ယောက်ျားနေသောလိင်ကျေးကျွန်နှင့်အတူအမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုကိုအရေးယူပျော်မွေ့နိုင်သည့်အတွက်လိင်ဂိမ်းတွေ့. ဤသည်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကြက်နှင့်ဘောလုံးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်အတူလာ.,တံစို့နှင့်အခြားအရှက်လှုပ်ရှားမှုများစာရေးဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ပြည်တော်ပြန်ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ဒီစုဆောင်းမှုအတွက်လိင်ဂိမ်းရှိသည်။ သင္၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္သင္၏ဇနီး၏ေရွ့တြင္ေလ့က်င့္ေပးရန္ျဖစ္ျပီးသင္၏အားၾကီးေသာသိုင္းကြက္ျဖင့္ဇနီးကိုေျမွာက္ပင့္ေပးရန္ျဖစ္လိမ့္မည္။သင္၏ေနာက္တြင္သင္၏ဇနီးကိုရက္စက္စြာျပဳမူဆက္ဆံျပီးေသာေနာက္တြင္သင္၏ဇနီးကိုေျမွာက္ပင့္ေပးလိမ့္မည္။
ကြီးစိုးခံနေရတဲ့စိတ်ကူးကိုပြောင်းလိုက်ရင်လိင်ကျွန်အဖြစ်ကစားနေတဲ့ညစ်ညမ်းကစားနည်းတစ်ခုကိုသင်လည်းလိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းအများစုဟာလိုက်.ဖမ်းမိတဲ့အပေါ်အခြေခံသည်,ထောင်ထဲကယူ,နှင့်အရူးမျိုးအမျိုးမျိုးသို့အတင်းအဓမ္မ. ဒီအွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းအချို့အတွက်,ညစ်ပတ်လိင်ပြစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးအားဖြင့်သင်တို့ချပြီးနေသောသခင်ပင်လူသားများမဟုတ်. ငါတို့သည်ဤစုဆောင်းမှုတွင်ထည့်သွင်းအရူးဂြိုဟ်သားများနှင့်ပင်ဖုတ်ကောင်လိင်ဂိမ်းနှင့်အတူကြွလာအချို့နဂါးဂိမ်းများရှိသည်။
ဒီအမျိုးအစားထဲမှာ,သင်သည်လည်းမုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းများကိုတွေ့လိမ့်မည်. ဤရွေ့ကားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးကစားသမားများအကြိုက်ဆုံးများမှာ,မည်သူမဆိုစိတ်ကူးနိုင်ထက်လမ်းပိုပြီးအမာခံနေသော. ဤရွေ့ကားအရူးစိတ်ကူးယဉ်ဂိမ်းများကိုသင်ညဉ့်အခါတောအုပ်နှင့်အချည်းနှီးသောလမ်းများမှတဆင့်လိုက်.ရတဲ့အမျိုးသမီးအဖြစ်ကစားလိမ့်မည်သည့်အခြေအနေအမျိုးမျိုးနှင့်အတူလာနေကြပါတယ်,ဒါပေမယ့်နှာရည်ယို,အစွမ်းထက်,နှင့်စူးရှမှုအကူအညီမဲ့မိန်းကလေးငယ်များကိုချစ်သောသူချောမောယောက်ျား.
စာသားအခြေခံတဲ့အမျိုးအစားဟာကျောင်းဟောင်းနဲ့ခေတ်မမီဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လိင်ဂိမ်းတွေရဲ့အခြေအနေမှာတော့သူတို့ဟာလိင်ဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုရဲ့ရူးကြောင်ကြောင်ခရီးမှာသင့်ကိုဆွဲဆောင်မယ့်တုံ့ပြန်တဲ့သရုပ်ပြဝတ္ထုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီဂိမ်းများ၏စိတ်ကူးသင်တစ်ဦးအများကြီးပိုစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုပေးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်. မသာသင်သည်ကြီးမြတ်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူဂန္အမြင်အာရုံဆွရလိမ့်မည်,ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ခံစားမှုစိတ်လှုပ်ရှားစရာများ.
ဤဂိမ်းတွင်စာသားအစိတ်အပိုင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုသင်အဓိကဇာတ်ကောင်၏ရှုထောင့်ကနေဇာတ်လမ်းထဲမှာအရာအားလုံးတွေ့ကြုံခံစားစေရန်ဖြစ်လိမ့်မည်. သင်ကအဓိကဇာတ်ကောင်စဉ်းစားသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စိတ်ခံစားမှုဇာတ်လမ်း၏အပေါငျးတို့သအပြင်းအထန်သွားစဉ်သူတို့၏ဦးခေါင်းမှတဆင့်သွားသောအရာကိုသိမှရလိမ့်မယ်. ဒီလာခဲ့တာဖြစ်သလိုအဲဒီအချိန်ကရဲ့အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းသင်အမှန်တကယ်အရေးယူအတွက်စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်ပုံဖော်ကျေနပ်ပါတယ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်.
ငါတို့သည်ဤစာရင်းတွင်အသစ်အခမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းစောင့်ရှောက်. ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကိုမှတ်သားထားနိုင်ပြီး၊ဟောလိဝုဒ်ခံစားရတဲ့အခါတိုင်းပြန်လာကြမှာပါ။ ဤဆိုဒ်တွင်ဤမျှလောက်ဂိမ်းသင်ဖြစ်နိုင်သည်ကအားလုံးကိုပြီးအောင်မနိုင်,သင်အဆုံးအပေါ်လအဘို့နေ့ညဉ့်ကစားလျှင်ပင်.